ဟယ်လို:ကျေးဇူးတင်စကားအတွက်အချိန်ယူပြီးမှလာရောက်လည်ပတ်ပြီးမှာလိင်တူချစ်သူဂိမ်းများ:နိုင်သည်အဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပြော၊ကျွန်တော်တို့အသည်းအသန်စုလူမျိုး၏စောင့်ရှောက်မှုကြီးတင်ကမျှားတက်နှင့်အတူအကောင်းဆုံးအရွယ်ရောက်ဖျြောသူသည်မှလူသိများ၊ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာစီးပွားရေးအတွက်အပြန်အလှန်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူလိင်၊လိင်၊အမျိုးသားနှင့်လိင်စိတ်။, ကျနော်တို့အကြောင်းယုံကြည်အနာဂတ်အရွယ်ရောက်ဖျြောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလွန်အာရုံစူးစိုက်သွားဖို့မှာတင်ကြသောအခါဖြစ်ပျက်ၡမ်ားကြောင်းအရာသို့အလှန်ဆက်သွယ်ပတ်ဝန်းကျင်:လူအဖို့နိုင်ဖြစ်ချင်တယ်ခၚရိုက်ချက်များနှင့်ကောက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အဖြစ်အပျက်မှကြွလာသောအခါပူပြင်းတဲ့လိင်တူချစ်သူလိင်အစည်းအဝေး! ဒီနေရာကလာအတွက်၊ကျနော်တို့ဂုဏ်ယူင်နှင့်အခွင့်ထူးခံနိုင်စေဖို့အကောင်းဆုံးသောအရွယ်ရောက်အကြောင်းသိဖို့ယောက်ျားဆိုတာဘယ်တော့မှရပ်တန့်ချွတ် jerking။, ဒါကြောင့်၊ရင်းနောက်ထပ်ကြောင်းသတိပြု၊ရဲ့ပြောဆိုကြကုန်အံ့စေသည်ဘာကိုခန့်လိင်တူချစ်သူဂိမ်းများအတွက်အထူးနှင့်အဘယ်ကြောင့်သင်စဉ်းစားသင့်ပါသည်ဒီသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးခေါ်ရန်ဆိပ်ကမ်းသင်လိုချင်တာအခါတိုင်းညှစ်ဖို့သင့်ဝက်။ ငါထင်ကြောင်းပြောဖို့လုံခြုံနှင့်အတူဤမျှလောက်များစွာသောရွေးချယ်မှုများထွက်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်၊ကျနော်တို့တကယ်ခဲ့ဖို့စာအိတ်တွန်းအားပေးနှင့်ပြသၡာလုံးဝထူးခြားသောနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုမှရင့်ကျက် XXX အလှန်အတွေ့အကြုံ!
မှန်တယ်:သင်ချင်တယ်ဆိုရင်သင်တက်လက်မှတ်ထိုးရန်လိင်တူချစ်သူဂိမ်း၊သင်အဲဒီလိုလုပ်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ အကြောင်းရင်းကကျနော်တို့ဤအမှုကိုပြုသောဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအဖြစ်အများအပြားဂိမ်းကစားရန်တတ်နိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာဆာင္ပတွေ့မြင်အတိအကျအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်သွားဒီနေရာမှာအပေါ်။ ဒါကြောင့်ဝေးကျနော်တို့ဖို့စီမံခန့်ခွဲမယ့်ဆောင်းတစ်ဝက်တစ်သန်းအဖွဲ့ဝင်–ဒါပေမဲ့အနီးဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်အများအပြားကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မျှော်လင့်ထားပါတယ်တနေ့ရှိသည်! တူစကေး၏စီးပွားရေး၊ကျွန်တော်တို့ဟာညှိနှိုင်းပိုကောင်းအပေးအယူနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့စပွန်ဆာ၊အရာအလှည့်တွင်ခွင့်ပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းအဖြစ်အခမဲ့ကစားရန်။, ကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်စောင့်ရှောက်ရန်ဒီနေရာဖြစ်ကျင့်ဝတ်နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှပတ်သက်ဘဏ္ဍာရေးနှင့်ဂိမ်းလွန်း–ရှိမရှိကောင်းကျိုးသင်ဝယ်ယူရန်နိုငျသောအခြားဂိမ်းကစားကျော်ပေးနိုင်ရန်အတွက်ပိုကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုရင်း၊နက်ရှိုင်းတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှတူ။ ထိပ်နှင့်အောက်ခြေများ၏လိင်တူချစ်သူဂိမ်းများသည်သင်ချင်တယ်ဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ဒီမှာပျော်မွေ့နေတာလေ၊နေအောက်၌အဘယ်သူမျှမဖိအားမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်အတွက်အောင်မြင်ရန်နိုင်ရန်အဆုံးသတ်။ ကျွန်တော်တို့တင်ထားရန်မျှော်လင့်ဥပမာတစ်ခုမှကြွလာသောအခါအအရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းအတွက်ဒီနေရာကိုအလျင်အခြားလူများနှင့်အတူဒီယိုသို့ကျ၊အကောင်း!
ကျွန်တော်ဂရုစိုက်အလွန်အကြောင်းအများကြီးဖန်တီးအလွန်ကြီးစွာသောအသိုင်းဒီနေရာမှာအဘယ်ကြောင့်ဟူဖြစ်ပါသည်၊ကျနော်တို့ရှိသည်အရေအင်္ဂါရပ်ရရှိနိုင်ရန်ချင်တယ်ဆိုရင်စကားပြောနှင့်အတူအခြားသူများ။ မရွိေသာ္လည္းစူပါပေါ်စိတ်အားထက်သန်သောအမျိုးအစားအရာဖြစ်ပါသည်၊ကသတင်းကောင်းကြောင်းလိင်တူချစ်သူဂိမ်းဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုအကောင့်တစ်ခုဖန်တီးဒီမှာအသုံးပြုရန်အကျိုးကျေးဇူးများရှိသမျှနှင့်အတူလာတွေအများကြီး၏အဖွဲ့ဝင်များ! ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးအရာကတော့အသိုင်းအဝီကီ၊ထောက်ပံ့ပေးသောအများကြီးအပေါ်အသေးစိတ် ၃၀+ကစားပြိုင်ပွဲလက်ရှိအခြေအနေအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ကွန်းတိုက်။, သင်သည်လည်းသွားပေါ်သို့အရာရှိဖက်ဆာဗာလျှင်သင်အကူအညီလိုအပ်၊သို့မဟုတ်ရုံမျှသာတုံ့ပြန်ချက်ကိုပေးဖို့အတွက်စာရင်းသွင်းနိုင်အောင်သင်ထင်သောအရာကိုသိပါ၏ခေါင်းစဉ်ရှိသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ရဲ့သင့်လျော်သည်ငါတို့အဘို့ပြုမှ။ ဤသည်၏အနာဂတ်အရွယ်ရောက်ပြီးဂိမ်းကစားခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဟာစဉ်းစားသောအကြီးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့အင်္ဂါသူတို့ကိုမှရရှိနိုင်၊ပိုကောင်း။ လိင်တူချစ်သူတွေရဲ့မာနကကြီးမားတဲ့အဓိကဒီနေရာမှာလည်း၊ဒါကြောင့်မကြောက်ကြရပေါ်သို့တရားဝင်ဖိုရမ်နှင့်မျှဝေနှင့်သင့်စမ်းချောင်းခဲ့တဲ့လူမျိုး၏ထောင်ပေါင်းများစွာဒီလိုလုပ်ပြီးပြီ!
ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲဖို့စည်းရုံးသိမ်းသွင်းရလိမ့်မယ်၊ဒါကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးလူတွေကိုမှကြွလာသောအခါဤအမျိုးအစားအရာဖြစ်ပါသည်၊နှင့်ကျွန်တော်တို့အတွက်တကယ်ကောင်းသောအသွင်သဏ္ဌာန်ကိုရောက်စေနိုင်လိမ့်သင်အပူဆုံးလိင်နှင့်လိင်ဂိမ်းများ။ အများအပြားရှိသန္ဓေမီဒီယာလွန်း၊ဒါကြောင့်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါလျှင်ပျော်စရာအလှန်မိတ်ဆက်မဆိုဤသဘောတရား၊ဤအရပ်မှရသည့်ထူးကဲသောပစ္စည်းပမာဏ၏လက်ျာသင့်ရဲ့လမ်းကြား။ ဒါဟာတစ်ဦးအကြွင်းမဲ့ပေါက်ကွဲမှုအလုပ်လုပ်ဘို့ဤအရပ်၌ဤမျှကာလပတ်လုံးနှင့်အဖွဲ့သည်ရှာဖွေနေသည်ရှေ့ဆက်ရန်အများအပြားပိုပြီးအနှစ်၏အောင်မြင်မှုကို! လာသာနှင့်ပူးပေါင်း။